Soo Iibso 550mg 120 Capsules Whey Protein Powder Capsules - Maraakiibta Bilaashka ah & Canshuur La'aanta | WoopShop®
550mg 120 Capsules Macmacaanka Wheat Protein Powder
$ 35.08 qiimaha joogtada ah $ 44.98
550mg 120 Capsules Macmacaanka Wheat Protein Powder gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Nooca Item:Cirridka luminta culeyska
Waa maxay sababta 100% MBHAVE WHEY PROTEIN? MBHAVE 100% Whey Protein waa borotiin whey ah oo si dhakhso leh u dhuuqa oo loo sameeyay si ay kaaga caawiso inaad dhisto murqaha oo aad dhaqso ugu soo kabato Kaabsal kasta oo ka mid ah MBHAVE 100% Whey Protein waxaa ku jira 550mg oo ah borotiin whey ah oo qiimo sare leh. Qaacidadan qaaska ah sidoo kale waxay ka kooban tahay xaddi hodan ah oo Borotiin ah, BCAAs MBHAVE 100% Whey Protein waxay kakooban tahay protein tayo sare leh oo tayo leh oo la heli karo waxaana lagu baaraandegayaa iyadoo la adeegsanayo sifeynta yar ee iskutallaabta. Nidaamkan sifeynta sareeya wuxuu hayaa jajabka borotiinka muhiimka ah ee lumi kara inta laga sifeynayo caadiga ah. Whey Protein sidoo kale waxaa ku jira Glutamine iyo L-Leucine si loo kordhiyo isku-darka borotiinka muruqyada iyo soo kabashada murqaha ka dib jimicsi xoog leh. Tani waa borotiin loo qaabeeyey inuu u shaqeeyo sida ugu adag ee aad adigu u shaqeyso oo kale! Whey Protein Powder WPC80 Fitness Nafaqooyinka Cunnada Kordhi Muruqyada Miisaanka Cuntada Cuntada Yaa ubaahan budada borotiinka whey Kuwaas caafimaadka liita iyo daciifnimada jirka ee la ildaran cudurada ba'an ee daran ee caloosha iyo mindhicirka, malabsorption-ga caloosha ku shaqeeya ee dadka ku shaqeeya muddada baxnaaninta kadib ee qalliinka kadib Dadka Dadka ku jira xilliga miisaanka oo yaraada nin Xanuuno daran oo maskaxeed Endocrine, maqaarku wuxuu lumiyaa dhalaalkiisa waana u fududahay haweenka da'da ah 1, jimicsi kadib 30 ilaa 40 daqiiqo, qaado 5 Kaabsul oo ah borotiinka whey. Kadib jimicsiga jimicsiga sababtoo ah murqaha tababbaran ciriiriga ciriiriga, wuxuu gaari doonaa tababar ballaaran halkaasoo ay saameyn ku yeelan karto. Laakiin gabdhuhu way fududahay, inay ku tababaraan muruq weyn, waxay u baahan tahay inay sameyso tababar culus oo culus wey weynaan doontaa, miisaanka ku habboon waa la beddeli karaa oo khadadka quruxda badan. Halkii aad ka cuni lahayd baaquli noodle dagdag ah jimicsiga ka dib, ma ahan wax la taaban karo ama aan la awoodi karin cabitaanka koob borotiinno whey ah. 2, ka hor intaadan seexan cabin borotiinka whey oo leh miraha oo dhan, waxyaabaha ukunta laga sameeyo. Inta lagu jiro hurdada waa dheecaanka hoormoonka koritaanka, jirka waqtiga ugu habboon ee lagu soo saaro murqaha, waa isticmaalka ugu sarreeya ee nafaqeynta jirka. Dheeraadka borotiinku wuxuu ku siin karaa nafaqo koritaanka iyo kala-baxa jirka inta lagu jiro hurdada sidoo kale nafaqada ayaa lagu daray. Marka la helo miraha ama ukunta oo dhan, nuugista borotiinka waxay dheereyn kartaa waqtiga hurdada dheer ee jirka si loo bixiyo nafaqo sii socota.